Ity rafitra ity moa dia nilaza fa amin’ny lafiny rehetra io fampihavanana tokony hatao io fa tsy politika ihany. Mikasika izay indrindra dia nilaza ny filoha mpanorina ny antoko politika ABA na antokom-bahoaka Malagasy, Dany Rakotoson fa fandaniam-potoana izany fampihavanana ny mpanao politika izany. Ny politika, hoy izy, dia natao hamoahana stratejia hampandrosoana ny firenena amin’ny lafiny rehetra na sosialy na toekarena na hafa. Tsy simba ny fihavanana fa nianatra niaina foana isika Malagasy hatramin’izay. Isaky ny misy hevitra tsy mitovy ve dia hampihavana foana nefa lojika amin’ny politika izany hevitra tsy mitovy izany ? Vola tokony holaniana hanaovana fotodrafitrasa, hoy hatrany ny tenany, na zavatra hafa mahasoa ny firenena dia ho lany amin’izany resaka izany fotsiny kanefa tsy misy vokatsoa azo tsapain-tanana ho an’ny daholobe akory avy eo. Hevitra foana no niady teto fa misy olona te hahazo famatsiam-bola fotsiny dia mamorona ity hevitra hihetsiketsehana rehetra ity, hoy hatrany ny fanazavany, na ilay antsoina hoe “activisme”.